အရောင်နှစ်ရောင်ရှိသော တရုတ်စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Hanvos
အတုပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယမ် အလွိုင်းဘီး သို့မဟုတ် ဘေးဘောင်များ၏ အထူးအရည်အသွေး
တိကျသောစက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Forged Steel Wheel
အရောင်နှစ်ရောင်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘီးများသည် ဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ သေးငယ်သောတိကျသောဆွဲငင်အားနှင့် ကောင်းမွန်သော corrosion resistance-tance တို့ရှိသည်။ကွာလတီလည်း တိုးလာတယ်။
အရင်းအမြစ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး အစောင့်အကြပ်။
၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သော ဆုပ်ကိုင်မှု ရှိပြီး ကွေ့သည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်၏ ယိုင်လဲမှုကို လျှော့ချပေးကာ ချော်လဲခြင်း နှင့် ပျံ့လွင့်မှုကို လျှော့ချပေးကာ လည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်သော ဘရိတ်အုပ်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော လည်ပတ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
မြင့်မားသောတိကျမှု၊ စွမ်းအားမြင့်မားမှု၊ ပြင်းထန်သောအပူကိုစွန့်ထုတ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးမြှင့်မှု၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် dura-bility နှင့်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘီးများသည် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တောက်ပြောင်ကာ ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် အလုံးစုံအသွင်အပြင်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။
US ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ပါလဲ။
စျေးနှုန်းကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ owm ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဘီးများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းတွင် အထူးပြုပြီး သင့်အား အကောင်းဆုံးဘီးများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ပါ။
အနှစ် 20 အတွေ့အကြုံ
လိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပို့ဆောင်ပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာအဖွဲ့သည် ဘီးထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော အသိပညာရှိသည်။
1. ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို မည်သို့သေချာစေမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် 360 ဒီဂရီအာမခံချက်မူဝါဒ ရှိပါသည်။
1. နမူနာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်၊ အော်ဒါမတင်မီ စပေါ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းမပြုမီ၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်၊ သင်သည် အလွန်ပျော်ရွှင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
2. ပေးပို့ခြင်းမပြုမီတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းသည် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးသည်၊ အရည်အသွေးရှိလျှင်၊ ထုတ်လုပ်မှုသည် အတည်ပြုထားသော နမူနာများနှင့် ကွဲလွဲနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါမည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်မီ မပို့ဆောင်ပါက သင့်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို မြတ်နိုးပါသည်၊ ဖောက်သည်တိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မရွေး ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5. ပဏာမဒီဇိုင်းတွင်၊ စံနှုန်းပြည့်မီစေရန် နမူနာများပေါ်တွင် အ radial နှင့် bending tests များကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
ယခင်- လက်ကား စိတ်ကြိုက် Alloy Wheels Rim Forged Wheels
တိကျသော Ma ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Forged Steel Wheel...
ဖော်ထားသော အလွိုင်းဘီးများ စိတ်ကြိုက် ၁၆-၂၄ လက်မ
ပိတ်ရန်အတွက် စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယမ် အလွိုင်းဘီးများ...
စိတ်ကြိုက်အရောင် 18-22 လက်မကား Forged Alloy Wh...
Forged Wheels စိတ်ကြိုက် Alloy Wheels HQ3042
Customization Wheels Car 16-22 Inch Rims Car Fo...